IMicrosoft icenga uGoogle ukuba athathe iMarike ye-imeyile yeNkampani | Martech Zone
IMicrosoft icenga uGoogle ukuba athabathe iMakethi yeNtengiso ye-imeyile
NgoLwesine, uJuni 25, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Njengoninzi lwenu, ndinyanzelekile ukuba ndisebenze neMicrosoft Outlook kwinkampani yam. Ndinyanzelwe ukuba ndiyile kwaye ndithumele ii-imeyile zisebenzisa i-HTML elula kunye nemifanekiso yokuqinisekisa ukuba abathengi bethu bayakwazi ukufunda ezo imeyile. Nge-Outlook 2007, IMicrosoft ishiye imigangatho yewebhu ye-HTML Babuyele kwi-2000 yabo esemgangathweni-enikezela nge-imeyile ngenjini yeMicrosoft Word.
Umbono ngoku uxele ukuba uguqulelo lwabo luka-2010 luza kuqhubeka ukusebenzisa i-Microsoft Word enikezela injini. Ekuphela kwengcinga endinokuyenza emva kweshumi leminyaka ndinganikeli ngoncedo kukuba iMicrosoft ayisenqweneli ukuba ngumnini weNtengiso ye-imeyile yeNkampani. IMicrosoft ayifuni ukunceda ishishini lakho ukuhambisa imiyalezo ngeefom ezisebenzisanayo, iFlash, okanye ukudityaniswa kweSilverlight. IMicrosoft kufuneka ifune uGoogle akhokele kule marike.
Ndiyacinga UGoogle ulungiselela ukuthatha kwakhona ngeGoogle Wave. I-Google Wave, ukuba ikhutshwe njengepapashiweyo, iya kuvula unxibelelwano lwendibaniselwano kunye nexesha lokwenyani, ukwabelana, kunye neseti eyomeleleyo yee-API zokudityaniswa kwesiko. Ndiqinisekile ukuba izakunika iifom kunye neFlash, nayo, kuba isekwe kwisikhangeli.
Oku kunokuba sisiphelo se-Outlook… kunye noTshintshiselwano ngokunjalo. Ukuba uGoogle angayiphucula i-imeyile kwaye ongeze amanqaku ahambisa unxibelelwano lwendibaniselwano, intengiso iya kusabela. Ukuba amashishini aqala ukubheyila kwi-Outlook, akukho sidingo sikhulu soTshintshiselwano lukaMicrosoft, nokuba.
Kukho imvukelo ekhulayo ngokuchasene neMicrosoft ngesi sibhengezo sitsha… Joyina i-chorus kwi-Twitter! Okanye musa… mhlawumbi into engcono ilinde kwikona!
Kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo bendisebenza neenkampani ekuphakamiseni itekhnoloji yokuphucula kunye nokwenza isicwangciso-qhinga sonxibelelwano sobuchule. Kuyamangalisa kum ukuba iMicrosoft, ngelixa ungumnini wentengiso ye-imeyile, wenze okuncinci kakhulu ukunceda ukuqhuba izinto ezintsha kuloo marike.
Intengiso ye-imeyile kufuneka iguquke ngokukhawuleza njengoko amajelo eendaba ezentlalo anayo… kwaye iMicrosoft kufuneka ibe yiyo inyukayo. Ukuba abayi kuyenza, ndiqinisekile ukuba uGoogle uya kuyenza.
tags: imeyile yomdibaniselwanodesktop umxhasiemailimeyile htmlUkunikezelwa kwe-imeyilegoogle gmailimbonakalo yeMicrosoftnembonojonga i-imeyilejonga i-html
Yintoni enokubakho kuPhando lweOrganic?
Kulula kangakanani ukwenza ishishini kunye nawe kwi-Intanethi?
Juni 25, 2009 ngo-12: 47 PM
Andiqinisekanga ukuba iinkampani 'ezinkulu' ngokwenyani ziyakwamkela ukutshintsha iqonga labo le-imeyile, kwimeko apho uGoogle angaphandle kweMicrosoft. Nditsho, ewe, ngelixa iMicrosoft ingumnini weimeyile ezihlanganisiweyo, kusekho iinkampani ezininzi zeFortune 500 ezisebenzisa iiLotus Notes… zakuba iinkampani 'ezinkulu' zenze into kunzima ukuyilungisa.
Juni 25, 2009 ngo-5: 32 PM
Yipoyinti elungile! Xa ndandisebenza kwiphephandaba, sasisebenzisa iiLotus Notes. Isizathu, nangona kunjalo, yayikukuba sinako ukwenza isisombululo sokuhamba ngokulula kwi-Domino edityaniswe kakuhle. Ndicinga ukuba ukuzenzekelayo kunye nokudibanisa amandla kubalulekile - ukuba uGoogle angabonelela ngeqonga eligcina imali, iinkampani zeFortune 500 ziya kuqala ukufuduka.